Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Aruba
Tahiry isam-bolana Febroary 2014 1 Lahatsoratra Novambra 2007 1 Lahatsoratra Tantara mikasika ny Aruba 23 Febroary 2014
SARIPIKA: Olombelon'i Karaiba Mpanoratra Matthew Hunte · Bahamas Sombim-piainana avy any Karaiba no itarihan'ny mpakasary, izay tahaka ny maro manerana ny glaoby, naka aingam-panahy avy amin'ny tetikasan'ny Olombelon'i New York, anao ao amin'io faritra io.
Vondronosy Karaiba: Ny Fanehoam-pankasitrahana Mpanoratra Janine Mendes-Franco · Amerika Latina Dia mitohy ihany ny fitantarana ireo fomba aman-danonana manerantany. Ao anatiny indrindra ny any Etazonia amin’izao fotoana izao. Dia resaka momba ny fomba avy any indray no resahintsika na dia ny any amin’ny nosy manodidina aza no ho tantaraina etoana. Mety hoe fialantsasatra mahazatra ny Amerikana Tavaratra ny Thanksgiving (androm-panehoam-pankasitrahana)...